कसलाई भेट्न प्रचण्ड जाँदैछन् थाइल्याण्ड ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » कसलाई भेट्न प्रचण्ड जाँदैछन् थाइल्याण्ड ?
कसलाई भेट्न प्रचण्ड जाँदैछन् थाइल्याण्ड ?
काठमाडौं, माघ १३ गते । केही दिन पहिले थाइल्याण्डबाट फर्केका एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आउँदो माघ १५ गते थाइल्याण्डको बैंकक प्रस्थान गर्नुहुने हुनुभएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट बिहान ११ बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले बैंककमा उपचाररत पार्टीका सचिव वर्षमान पुन अनन्तको स्वास्थ्यको बारेमा थप जानकारी लिनु हुने बताइए पनि त्यहाँ उनका राजनीतिक भेटघाट रहेको छ ।
जब देशमा राजनीतिक उतार चढाव हुन्छ तब तब उनी थाइल्याण्ड जाने गरेका प्रचण्ड पुनः जान लागेका हुन् । एमाओवादी स्रोतले भने, वर्षमान पुनः भेटन् त एउटा बहाना हो । उहाँ त राजनीतिक भेटघाटका लागि जाँदै हुनुहुन्छ ।
यसअघि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्ड पटक पटक थाइल्याण्ड गएको आरोप लगाएको छ । थाइल्याण्डमा गएर उनले भारती एजेन्सीहरुलाई भेटेको यसअघि कुराहरु बाहिर आइसकेका छन् ।
प्रचण्डका सचिवालयका अनुसार एमाओवादी सचिव अनन्तको स्वास्थ्यमा सुधार आउन थालेपछि उहाँलाई नेपाल ल्याउने विषयमा बैंककस्थित चिकित्सिकहरुसँग छलफल गर्न उहाँ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्नुभएको हो ।
साथै अध्यक्षले बैंककमा संगठनको वर्तमान अवस्था र नेपालमा पार्टीको देशव्यापी स्थितिको बारेमा पनि सचिव अनन्तसँग छलफल गर्नुहुनेछ । लामो समय उपचारका क्रममा रहनुभएका सचिव अनन्त पार्टी गतिविधि र पार्टीका बैठकमा अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले हालै ७ वटै प्रदेशहरुको प्रादेशीक कमिटिका बैठक र प्रशिक्षण सकिसक्नु भएको छ । सो क्रममा उहाँले देशव्यापी रुपमा पार्टीको सांगठनीक स्थितिको बारेमा पनि रिपोर्ट लिईसक्नुभएको छ ।